သင့်ခွေးကလေးကိုအပြုသဘောသင်ကြားရန်လက်တွေ့ကျသောအချက်များ | ကမ္ဘာ့ခွေးများ
ဖာနန် | | ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, လေ့ကျင့်ရေး, ခွေးများ
သင် visitors ည့်သည်များရောက်လာသောအခါသူတို့၏ခွေးကိုသော့ခတ်သူများထဲမှတစ် ဦး လော။ ဤအခြေအနေသည်ဖော်ရွေသောခွေးများဖြစ်သည့်တိုင်အိမ်များစွာတွင်အလွန်ဂန္ထဝင်ပုံတစ်ပုံကိုဖော်ပြသည်။ ခှေး၎င်းသည်မည်သည့်လည်ပတ်မှုနှင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။
အချိန်အများစုသည်၎င်းကိုသွားရန်အကြံပြုလိုသည် သီရိ ကျွမ်းကျင်သူ၊ သူတို့၏သစ္စာရှိအပေါင်းအဖော်များအားကောင်းသောအမူအကျင့်ကိုသင်ကြားရန်အချိန်နှင့်အချိန်ရှိသော“ သခင်” များစွာရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာများကို petshops များတွင်ရောင်းချပြီး၎င်းသည်ဖျော်ဖြေရေးသာမကသင်ယူခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ အထူးသီးခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်မြင်နိုင်သည် ကြိုက်တယ်, သင်တန်းဖြစ်စဉ်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီးရီး။
သင့်ခွေးကလေးကိုစာသင်ခန်းအချို့ပေးဖို့စဉ်းစားနေပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်ဤအကြံပြုချက်များသည်သင့်အတွက်များစွာအကျိုးရှိလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး စွာခွေးပေါက်စများသည်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုတောင်းသောကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုသင်ခန်းစာတစ်မိနစ်လျှင်အနည်းဆုံးသာသင်ကြားသင့်သည်။ သင့်ခွေးကလေးသည်အသက်လေးလမှခြောက်လကြားတွင်သူသည် ပိုမို၍ တရားဝင်နာခံမှုသင်ခန်းစာများကိုစတင်နိုင်သည်။
ဤချဉ်းကပ်မှုအတွင်း“ လာဘ်ထိုးခြင်း” သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များရှိသည်ကိုသင်သတိရသင့်သည်။ သင့်ခွေးကလေး၏အပြုအမူများကို cuddles ဖြင့်အမြဲတမ်းဆုချရမည်။ အစားအစာ o ကစားစရာအရုပ်။ သင်တို့သည်လည်းမြဲခြင်းနှင့်တသမတ်တည်းဖြစ်ရမည်။
ပြင်ပ / မခုန်ပါ - ခွေးကလေးကိုနောက်ပြန်ရွေ့ရန်ပြောရန်သော့ချက်စကားလုံးဖြစ်သည်။ “ မခုန်ပါနှင့်” ဟူသောအသုံးအနှုံးသည်အထူးလေးနက်သင့်သည်။ အသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်သူ့ကိုထိုင်ခုံမှာထိုင်နေစဉ်သို့မဟုတ်သူနေချိန်မှာသူ့ကို kibble ပေးဖို့မမေ့ပါနှင့်။
ပြောပါ - ဒီလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်သူ့ကိုအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုပြပြီးပြောမယ် သူသည်ထိုအကြံဥာဏ်ကိုရရန်သင်“ ဟောင်” ရမည်။
Shut up: ခွေးတွေဟောင်လိုက်တာနဲ့ဒီ command ဟာအလွန်အရေးကြီးလာတယ်။
Dame: ဒီအမိန့်ဟာခွေးကလေးရဲ့ကစားစရာတွေနဲ့အစာတွေကိုစွန့်လွှတ်ဖို့သင်ယူဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အစားအစာအတွက်အရုပ်အဖြစ်လဲလှယ်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ခြင်းသည်စတင်ကောင်း၏။
Grab / Drop: ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်ဖို့လမ်းလျှောက်ဖို့၊ သူ့ရှေ့မှာအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုယူပြီး 'grab!' လို့ပြောဖို့လိုတယ် ခွေးကလေးသည်လုပ်ဆောင်မှုကိုနားလည်သောအခါ“ stop it!” နှင့်ဆက်သွားပါ။ နှင့်သားညှပ်ပေါင်မု drop ။ သူကသရေစာသွားသည့်အခါ "နုတ်ထွက်!" ကိုနှိုးဆွစဉ်နှာခေါင်းကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာထိတွေ့သင့်သည်
လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စတင်ရန်သင့်တွင်အကြံဥာဏ်အချို့ရှိသည် လေ့ကျင့်ရေး သင့်ရဲ့ခွေးကလေး၏။ မင်းဘာစလုပ်ဖို့စောင့်နေတာလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » သင့်ခွေးကလေးကိုအမူအကျင့်ကောင်းများသင်ကြားရန်လက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက်များ
Leilani valdez ဟုသူကပြောသည်
ဒါကငါ့ကိုကူညီပေမယ့်မင်းကိုပိုပြီးရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ X2
Leilani Valdez အားပြန်ပြောပါ
Graciela Neyra uribe ။ ဟုသူကပြောသည်
Graciela Neyra uribe အားပြန်ပြောပါ။
ana solis ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ငါ့ခွေးကအပူရှိန်ရှိနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်မနက်ခင်းအန်တာ ၂ ရက်ရှိပြီ၊ ဒါကပုံမှန်လား။
ana solis ကိုပြန်ပြောပါ